Dogoggora of eeggannoo
Deetaan Fashalaawaa yommuu man'ee seenee, ergaa dogoggoraa mul'atuu hiiki.
Ergaa dogoggoraan maakroo eegaluu dandeessa.Eddattoon maakroo umaa fulaa kanaa irratti kennama.
Yommuu gatiiwwan fashalaawaa galuu ergaa dogoggoraa agarsiisi.
Haaloota lameeniti,yoo "Dhaabbii" filattee,galmii fashalaawaan baduun gatiin darbee lamataa man'ee seena.Halaama kanaan qaaqoota "Akeekkachiisa" fi "Odeeffannoo" yoo cuftu qabdoo Haqii cuqaasi.Yoo qaaqotaa qabdooEyyeen cuftee,galmii fashalaawaa hin haqamu.
Yommuu deetaan fashalaa man'ee seenu gocha ta'uun barbaachisuu fili. Gochi "Dhaabbi" galma fashalaa gatuufi Tole cuqaasuudhaan qaqaa haquu barbaadduu agarsiisa.Gochaawwwan "Akeekkachiisa" fi "Odeeffannoo" qaqoota Tole ykn Dhiisi cuqaasun cufamuu danda'an agarsiisa.Galmii fashalaawa kan gatamuu yoo Dhiisi cuqaaste qofa.
QaaqaMaakroo iddoo itti yommuu deetaan fashaalaawee man'ee seenu maakiroo itti filattu bana.Erga eergaan dogoggoraa iftaayee dooba gochii maakiroo rawwata.
Mata duree Maakiroo ykn Ergaa doggoggoraa jedhu galchuun deetaan doggoggoraa yommuu man'ee seenuu mul'isuuf oola.
Deetaan doggoggoraa yommuu man'ee seenuu ergaa mul'isuu barbaaddu galchi.
Title is: Dogoggora of eeggannoo